प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बचाउमा बार,भन्छ डा.केसीले अनसन तोड्नुपर्छ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
योगी आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमणबाट मोदीलाई के फाइदा?
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बचाउमा बार,भन्छ डा.केसीले अनसन तोड्नुपर्छ
काठमाडौँ । न्यायालयको बेथितिविरुद्ध निष्क्रियजस्तै रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार एकाएक विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गरेको छ । बारले शुक्रबार एकाएक विज्ञप्ति जारी गरी न्यायपालिकालाई दबाबमा पार्ने गरी अनसनलाई निरन्तरता नदिन समेत अनसनरत डा. गोविन्द केसीले आग्रह गरेको छ ।
बारको यो विज्ञप्ति कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको सल्लाहविना नै आएको हो। बार उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकले बार कार्यसमिति पदाधिकारीहरुविच कुनै छलफल र सरसल्लाह नै नगरी विज्ञप्ति आएको बताइन्। ‘सल्लाहकार र कार्यसमितिको बैठक भनेर बजारभर होहल्ला भयो,’ उपाध्यक्ष पाठकले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘कतिपय साथीहरु र मलाई नै कार्यसमितिबारे जानकारी छैन। सोझै विज्ञप्ति निकालिएको हुनुपर्छ।’
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका बार महासचिव खम्मबहादुर खातीले कुनै विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न कार्यसमितिको बैठक नचाहिने बताए। ‘यस्ता कुरामा छलफल गर्न सचिवालय बनाइएको हुन्छ। अनौपचारिक रुपमा छलफल गरेर विज्ञप्ति निकालिएको हो।’ बारले डा. केसीको मागबारेमा सञ्चारमाध्यमहरुबाट प्रकाशित समाचारप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ।
बारले डा. गोविन्द केसीको अनसन र प्रधानन्यायाधीशमाथि राजिनामा माग गरेको विषयमा विज्ञप्तिमा चारवटा विषयवस्तु अघि सारेको छ। केसीले अघि सारेको माग गलत उल्लेख गर्दै त्यसमाथि आम स्तरमा भएको समर्थनलाई समेत ‘गलत’ भनेको छ। डा. केसीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णयको स्वागत गर्दै उसले अब अनसन जारी नराख्न डा. केसीलाई आग्रह गरेको छ।
उसले अनसन नगर्न/नगराउन भन्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘साधारण ताखेरमा रिहा गरेकपछि पनि डा. केसीले अनसन जारी राखेकाले,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै प्रकारको दबाब र प्रभाव स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि अशोभनीय हुने हुँदा यसप्रकारको कार्य नगर्न नगराउन सम्बन्धित पक्षसँग बार हार्दिक अपिल गर्दछ।’